Video Editor Simple: Edit iyo Enhane Your Video Si fudud
> Resource > Video > Sida loo abuuro cajiib ah Videos in hab fudud oo
Weligaa ma doonayay in la abuuro aad movie gaar ah laakiin la mid aad u cabsi ay adag oo qaali ah software video tafatirka? Hel fudud video editor halkan: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ). Waa software ah video aasaasiga ah tafatirka in fudud qof walba si ay u isticmaalaan. Sidaa daraadeed, samaynta filimada iyo slideshow si ay u wadaagaan online waa fud aad u.
Sida fudud video editor, taas macnaheedu ma waxaa dhammayn karaa oo kaliya ah hawlaha yar oo sahlan, oo toobad keen oo dhan adag oo waqti lumis video itusi hawlaha fudud oo degdeg ah, laakiin. Waxay bixisaa qalabka tafatirka guud sida falinjeeerka, lana siii, qoqobada, isku, iwm, iyo sidoo kale polishes aad video boqolaal kala guurka, saamaynta, qoraalka, mawduucyada, iyo dhawaaqa. Na raac si aad u aragto sida fudud video gaare xaalkaa doonaa oo kor video isla in hab fudud.
Fiiro gaar ah: Hoos hage qaadataa Screenshot Windows, laakiin hawlaha version Mac dhowaad isku mid ah.
Si aad u dajiyaan aad video & audio, aad leedahay hoos ku qoran siyaabo sahlan oo wanaagsan:
Guji "Import" xitaa folder file aad ku shuban iyo dhammaan faylasha aad u baahan tahay.
Jiid faylasha aad si toos ah tan uu furmo suuqa hoose.
Ogsoonow in fudud video editor waa heer sare ah la jaan ku dhawaad ​​qaab video kasta oo halkaas, sidaas darteed ha ka welwelina baadi dejinta. Haddii ay sidaa tahay wax kasta oo ka reeban dhacaan, aad macluumaad faylka kooxda taageerada gudbin karaan si uu u xaliyo dhibaatada aad isla markiiba. Marka dhammaan faylasha ku raran yihiin dhanka bidix ee Murayaad, jiididda iyo hoos u iyaga oo ku Timeline Video ah.
2 video Simple sixiddiisa on Timeline
Si fudud isku shaandheyn, jar, jaray, kala videos ama kaabidda midabka
Marka aad jiidi videos maktabadda Media in ay Timeline ah, iyaga waxaa laysugu soo muuqan isku daro doona default. Dhammaan qalabka yihiin anfacaya haddii aad rabto in aad hesho qayb ka mid ah aad video, shaandheyn 90 degrees in la saxo warejin , dalagga baararka madow si shaashad buuxda, kor / hoos xawaaraha ciyaartoyda, Nuurkii ganaax-habayn, la barbardhigo, cado, iyo in ka badan dedejiyo. Talooyin : Waxaad sidoo kale qabsato karaa zoomer Timeline ka Mozilla gudaha / dibedda Jadwalka Loogu Talagalay raaxo video tafatirka.
Ku dar music soo jeeda, ka saar audio ka video, record voiceover
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad dooxi audio ka video files, kuna bedesho music aad ugu jeceshahay. Si tan loo sameeyo, oo kaliya xaq u riix si aad video dooro "Audio fuji" iyo tirtirto file music in si toos ah uu ugu qoran Jadwalka Music ah. Markaas jiidi jeedi la doonayo track audio ka dibna hagaagsan oo aad dhererka video. diiwaangelinta voiceover ah in la siiyo Sheeko la sidoo kale waa wax fudud oo la filimka gaare fudud. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waxaa ku dhacay "rikoor voiceover" icon on toolbar ah, oo ay bilaabaan in ay ka shaqeeyaan waxa ay ku aad makarafoonka.
Codso qoraalka, goobaha, sida diirada muuqaal ah, Liiska Forbes, iyo codad
The fudud video gaare ayaa sidoo kale waxay bixisaa ilo hodanka ah iyo si xor ah u qaadato video heerka ku xiga. Sida ku cad shaashada hoos ku qoran, waxaad dooran kartaa ka 300+ saamaynta cajiib ah oo dheeraad ah u astaysto si ay u gaaraan in ka badan. Tusaale ahaan, waxaad ka qaadan kartaa saamayn ah fanaaniinta sida Snow, ubaxa, Naarta, oo la mid ah, iyo waxa ka codsan in click ah. Si aad u codsato qoraalka si aad video, kaliya jiidi oo hoos u template aad jeceshahay in aad dalbato in booska, iyo dheeraad ah astaysto ay zoom gudaha / dibedda saamayn, font, midabka, size, iwm loo gaaro waxtarka ugu fiican.
3 Save iyo wadaagno movie
Marka aad dhamaysato video tafatirka, badbaadinta aad masterpiece for loo maqli sahlan ma noqon karaan kuwo si fudud ula fudud video tafatirka software. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waxaa ka dhacay badhanka la abuuro, oo ay doortaan qaab aad doonayso inaad sida wmv, MOV, AVI, MP4, ama horena loo qaybiyay qalabka Xararad aad u ciyaaro on go ah.
Haddii aad rabto in aad qoyskaaga iyo saaxiibadaa wadaagaan abuurka, bedesho ah "YouTube" tab in ay si toos geliyaan ka barnaamijkan. Waxa kale oo aad ku gubi karaa in DVD disc ah daqiiqo qaybinta habboon.
In dhammaan, tan fudud movie gaare , wax walba waa ugu faraha xitaa aadan lahayn wax waayo-aragnimo wax soo saarka video. Sidoo kale, waxaa qiimo leh in la xuso barnaamijkan sidoo kale bixisaa qalabka tafatirka xirfadeed oo kale ah usii-wareeg, humaag, fool-off, jeexan boodi (Windows oo keliya), la ogaado goobta (Windows oo keliya) si ay kaaga caawiyaan in aad soo saaraan filim guriga laga cabsado in hab fudud.